Home » नेपालमा स्वास्थ्य सेवाको खोज र विकाश
by डा. हेमाङ्ग दीक्षित
- मत-अभिमत, स्वास्थ्य /शिक्षा
प्रा.हेमाङ्ग दिक्षितः (आज स्वास्थ्य सेवा एक सेवा नभई वस्तु वा मालमा परिणत भएको छ। यस वस्तुको स्वास्थ्यकर्मी, औषधि, निदानात्मक प्रविधि र अस्पतालको आक्रामक प्रचारले विक्रिवितरण हुने गर्दछ। शुरुमा क्रिश्चियन धर्मप्रचारकको परोपकारी सेवा रहेको यो वस्तु बेलायति साम्राज्यको विस्तारसँगै विश्व व्यापारको प्रमुख वस्तु बन्यो। यसले विश्वका समाज तथा समुदायमा रहेका उपचार प्रणालीहरुलाई दमनमात्र होइन, पातालमा भसाइदियो। नेपाल भारत जस्ता मुलुकहरुका वनस्पति तथा जडिबुटीमा आधारित आयुर्वेद तथा प्राकृतिक उपचार प्रणालीहरुको विकासलाई रोक्यो। यसको बदला स्वास्थ्य सेवा दिन पश्चिमा चिकित्सा शिक्षा, सो शिक्षामा प्रशिक्षित जनशक्ति, पश्चिमा कच्चापदार्थमा आधारित औषिधहरु र पश्चिममा विकसित, ठूला, महङ्गा प्रविधिहरु हाम्राजस्ता मुलुकहरुमा प्रवेश गरायो। सन् १८१६को सुगौली सन्धिको कारण नेपालमा खुलेको वेलायती रेजिडेन्सीसँगै पश्चिमा जगतको व्यापारिक पूँजिवाद प्रवेश भयो। यससँगै एलोपेथिक चिकित्सा प्रणाली हाम्रो समाजमा छिर्‌यो, जुन हाम्रो समुदायमा आधारित थिएन र हुदैन। यो वस्तु निर्माण हुने कुनै पनि कच्चा पदार्थहरु जस्तै चिकित्सा शिक्षा, औषधिहरु, जाँचबुझ प्रविधि आदि स्वदेशमा छैनन्। हामीले गर्ने भनेको जडान मात्र हो। यसैकारण यो सेवा प्रवेश भएको दुई सय वर्ष भइसक्दा पनि एलोपेथिक चिकित्सा प्रणाली हाम्रो स्वास्थ्य सेवा प्रणालीको रुपमा स्थापित हुन सकेको छैन। वारम्वार नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनगिन्ति समस्याहरु र वाधाहरु र अन्तरविरोधहरु देखा पर्ने गरिरहेकाछन्। त्यसैले स्वास्थ्य सेवा प्रणालीगत समस्याहरुको समाधान कुनै एक व्यक्तिको पवित्र चाहना र प्रयाशबाट सम्भव छैन। यसका समस्याहरुलाई नेपालभित्रबाट उत्पादन भनेर मात्र भनेर बुझियो भने ती समस्याहरु समाधान हुनसक्दैनन्। यी सबै विश्व पूँजीवाद र यसका प्रतिनिधि नेपालको दलाल पूँजीसँग गाँसिएका समस्याहरु हुन्। यसर्थ गाँउमा चिकित्सक पठाएर र कम शुल्कमा चिकित्सक पढाएर स्वास्थ्य सेवा नेपालीले पाउन सक्दछन् र सम्विधान प्रदत्त स्वास्थ्य अधिकार उपभोग गर्न सक्दछन् भनेर कल्पना गर्नु बेकार छ। सबभन्दा पहिला नेपालको स्वास्थ्य सेवाका समस्याहरुको निदान र उपचारका लागि यस प्रणालीको विकाससँगै यस माथि पूँजीवादको पकडबारे स्पष्ट हुनु पर्दछ। यसैकारण यसपटक हामीले यहाँ नेपालमा यस प्रणालीको प्रवेश र विकासबारे डा. हेमाङ्ग दिक्षितका विचार प्रस्तुत गरेकाछौं। यसपछि हामी एलोपेथिक उपचार प्रणालीका विभिन्न आयाम तथा समस्याहरुका साथै यस प्रणालीसँग नेपाली समाज र जनताको अन्तरविरोधबारे चर्चा गर्नेछौं। जुन चर्चाले यसिभत्रका समस्याहरु र अन्तरविरोधको समाधानार्थ केही प्रस्तावनाहरु पहिल्याउने विश्वास लिएका छौं- सम्पादक)।
by युवराज ज्ञवाली
०५४ सालमा पनि नेकपा एमाले विभाजित भएको थियो। मूलतः ‘२ जना केन्द्रीय सदस्य दिने कि नदिने’ भन्ने विवाद मात्रै त्यो...
कोभिड –१९ कहाँबाट आयो? यो प्रश्न अहिले सबैभन्दा ठूलो रहस्य भएको छ, किनकि यसको उत्पत्ति अझै पनि अनुत्तरित छ। यो...
बेलायतमा भारतीय स्वरुपको कोरोना भाईरस(डेल्टा भरियन्ट) फैलिँदै गएका बेला बेलायतीहरुलाई युरोपेली युनियन ९ईयु० का सदस्य राष्ट्रमा प्रतिबन्ध गर्ने विषयमा ईयु...
by एन्ड्रेइ टापालागा
मानव दुनियाँले देखेको जुनसुकै महामारीले मानिसलाई क्वारेन्टिन वा आइसोलेनमा बस्न बाध्य बनाएको छ। रोगको फैलावटलाई कम गर्न र भाइरसको खतराबाट...
by उमाईर हाक
केहि अन्धकार । मूर्ख शासक र खतरनाक बेलायत डुब्दै छ । यस्तो सँधै हुँदैन । यी दिनहरू सधैं आउँदैनन् ?...